sezinyawo White umntwana, ngokuvamile ubonisa ukuqala yokugula. Ngokuvamile, lokhu uphawu kubonisa ukungasebenzi ezibucayi ipheshana wokugaya ukudla. Uma cal elimhlophe livela njalo, kufanele ubone udokotela.
Lokhu uphawu engaveza ngenxa yokuphatheka umntwana umzimba esisogwini i yokudla yokufakelwa, ku ngabanye ubisi losana. sezinyawo White ngokuvamile kubonakala ngesikhathi kusungulwa ukudla aphelele, futhi teething. Ezinganeni ezindala, efana ukubonakaliswa kungase kube uphawu lokungabi contact ngokweqile nge umzimba ukhiphe i-calcium, okuyinto ekhona imikhiqizo yobisi. indle White futhi ezimweni eziningi kubonakala sebephuze izingilazi carbohydrate. Lokhu kungenxa yokuthi umzimba wengane akakwazi ukuba kabusha inkathi ethile. Ngakho, ngemva kwalokho angene endleni ezimhlophe kubangele yezizathu ezihlukahlukene can. Zonke izici ezingenhla kungukuthi labizwa ngokuthi enobungozi.
Nokho, njengoba umkhuba imibukiso, abazali abaningi kanye ukubukeka ingane indle elimhlophe, i-hepatitis esolwa ngokuyinhloko. Ngesikhathi esifanayo baqala ukubheka umzimba ingane nezinye izimpawu nobuntu jaundice (yellowing samehlo isikhumba). Kumele kuqashelwe ukuthi lezi zimpawu kungukuthi njalo ngokushesha ephelezelwa umkhuhlane - bangathumela avele kamuva. Futhi mayelana kwesibindi, kulesi simo, kuyoba kuphela umbala omhlophe of indle. Kodwa akufanele iziphetho ngokuphamazela. ukusazi ngokunembile isifo esikuphethe lufakwa udokotela kuphela ngemva nophenyo kunesidingo.
Ngaphezu kwalokho, uhudo elimhlophe lingase libonise kuwukwephula ukusebenza gallbladder, noma kunalokho ukuvimbela esinqunyiwe noma ephelele esiqeshini biliary. sezinyawo White kuba Bile ngenxa. Uma kungekho outflow kwalo, isisindo, elula.
Sezinyawo ungakwazi ukuthenga nombala omhlophe lapho zihlatshwa nemithi ethile noma ngenxa amanzi emzimbeni. Libuye libe isici uphawu ukutheleleka Rotavirus. Nokho, ukubonakaliswa concomitant babe retching, imfiva, umphimbo obuhlungu futhi ububomvu.
Kal omdala ezimhlophe ngokuvamile ibonisa ukugula okungathí sina. Ngesikhathi esifanayo, yebo, kufanele sinake ukuthi abantu badlile owedlule izinsuku ezintathu.
ezivame kakhulu fecal staining ezimhlophe izinkinga kanye kwesibindi, Bile Amapayipi noma amanyikwe. Ngokusho kwezazi ezithile futhi ezinye iziguli omdala, isimo kubonakala emva kokudla ibhotela, ukhilimu omuncu, ubhekeni kanye neminye imikhiqizo nge high lokucuketfwe fat. Futhi ukungaguquguquki woketshezi, imibala white, esihlalweni okunjalo iphunga kubuhlungu ngempela. Kufanele kuqashelwe ukuthi ezimweni ezinjalo ngokuvamile sitholakale isifo pancreatic. Kunoma ikuphi, ukucacisa uphethwe kuyadingeka ukuze ukuqhuba eminye ukuhlolwa laboratory.
Ngesikhathi ukusetshenziswa kwemithi izingane kanye nabantu abadala, sezinyawo kungenziwa zaveza emhlophe. Imithi, ukuyithukuthelisa uphawu ngokuyinhloko zihlanganisa izidakamizwa eqeda ukuvuvukala, imithi elwa namagciwane, nemithi, umphumela okuhloswe ngalo ukulwa sifo nezinye.
Esikhathini ukuthola eyinhloko indle elimhlophe akumele ngokushesha ukwethuka. Ochwepheshe batusa ukuba bagcine ukuthungwa nombala wayo isikhashana. Njengoba ojwayelekile, esingaphansi kwezinsuku eziyisihlanu noma eziyisithupha. Nokho, umbala evamile sezinyawo izovela zingakapheli izinsuku ezimbili kuya kwemithathu. Lapho isimo Yiqiniso eside kufanele kudokotela. Uma isimo is phetho ukuthuthukiswa isifo, uyoqhubeka isikhathi eside. Kulesi self akuvunyelwe. Zidinga ukunakekelwa.
Indlela ukukhulisa ingcindezi kubantu?
Amangqamuzana abomvu igazi: kwenqatshwa evamile futhi kungenzeka
Cedar tincture - umuthi i-umzimba nomphefumulo
Indlela yokuthola isisindo izinzuzo zezempilo
Lapho teething, izimpawu ngokushesha zile
Iresiphi ye-roulette ku-yogurt
Kungcono sitrobheli ngasekupheleni izinhlobo: incazelo, izithombe, yokuvuthwa, izincomo
Indlela ukupenda jeans ekhaya
Macaroni noshizi endleleni American: igxathu negxathu iresiphi
Garri Trumen - umongameli US. Biography, ubuzwe, isithombe, phakathi nokubusa inqubomgomo angaphandle